ဘဝမှတ်တိုင်: MTK သုံးဖုန်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့Firmware Backup ပြန်ဆွဲထုတ်နည်း
MTK သုံးဖုန်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့Firmware Backup ပြန်ဆွဲထုတ်နည်း
ကဲ......ဒီတစ်ခါ MTK cpu သုံးတဲ့ iMobile , Chain Android Clone စသည့်ဖုန်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ Firmware backup ဆွဲထုတ်ပြီပြန်သိမ်းထားရအောင် ဥပမာ rom ရှာရခက်မဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို ကလိတော့မယ်ဆို မကလိခင်အရင် သူဖုန်းrom ဆွဲသိမ်းထားလို့ ရပါတယ် အကယ်၍သူဖုန်းက
logo ကနေမတက်တော့ဘူဆိုrom ရှာရတဲ့ တိုင်ပတ်တဲ့ ဒုက္ခမတွေ့ တော့ဘူပေါ့ ဖုန်းကလိတက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ software ပါ လိုအပ်တဲ့သူတွေ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်နော်...
MTK Backup Tools ကိုဒေါင်းရန်
Here , Here , Here
ကဲဖုန်းတစ်လုံးကို backup rom မဆွဲထုတ်ခင် အရင်ဆုံးအရေကြီးတာက အဲဖုန်းရဲ့ usb driver ကိုသွင်းထားရပါမယ် ပြီရင် ဖုန်းကို root ဖောက်ထားရပါမယ်
ကဲအာလုံအဆင်သင့်ဖြစ်ရင် စောစောကဒေါင်းထားတဲ့ Backup tools ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
ပြီရင်စက်ရုပ်ပုံနဲ့ MTKdroid tools နေရာမှာဖွင့်လိုက်ပါ
ပြီရင် မိမိဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ
ကွန်ပျူတာက ဖုန်းကိုသိသွာပြီဆိုရင် အောက်နာက အပြာရောင်ပြထားတဲ့နေရာမှာ မိမိဖုန်းမော်ဒယ်ပေါ်လာပါမယ် ချိတ်ဆက်မူအောင်မြင်ပြီဆိုရင် root backup recovery နေရာမှာနှိပ်ပါ
ဒီပုံအတိုင်တက်လာပြီဆိုရင် Backup နေရာမှာနှိပ်ပါ ပြီရင်ခဏစောင့်နေပါ
အောက်မှာ အစိမ်ရောင်အတန်တက်နေပါမယ် ခဏစောင့်နေပါ copying is complete
စာတန်တက်လာပါက backup ဆွဲလို့ အောင်မြင်နေပါပြီ
ဒါဆို ဆွဲထုတ်ထားတာသေခြာလာမသေခြာလာ ဆိုတာ To prepare blocks for flashtools နေရာမှာနှိပ်ပါ
ဒီပုံအတိုင် Md5 ဖိုင်းနဲထွက်နေပါမယ်
ဒါဆို ဖိုင်းပြန်ခွဲထုတ်ဖို့ အတွက် open နေရာမှာနှိပ်ပေးလိုက်ပြီ ခဏစောင့်နေပါ
ဒီလိုမျို packing backup yes, no စာတန်တက်လာရင် no မှာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် စောစောက ဖိုင်းဝဲ Md5 ဖိုင်းထွက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ သွားပြန်ကြည့်ပါ zip ဖိုင်းနဲ့ ဒီလို့ ဖိုင်းအသစ်ရောက်နေပါမယ် ဒါဆို backup လုပ်လို့ အောင်မြင်ပါပြီ...
နဂိုဖုန်းသို့ မဟုတ် တစ်ခြားအမျိုးစာတူတူဖုန်းထဲကို ပြန်flash ခြင်ရင် SP Flash tools သုံးပြီးပြန်Flashနိုင်ပါသည် ဒါဆို rom ရှာဒေါင်းရတဲ့ ဒုက္ခ ကနေ ကးင်ဝေပါပြီ...
Post By : SmartGhost
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 1/12/2016 10:33:00 pm
Sony Xperia Z2/Z3 Lollipop 5.0.2 ကို Root & Myanma...
Samsung Firmware တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ အကုန်ဒေါင်းလိ...
Oppo စမတ်ဖုန်းတွေကို Root မလုပ်ဘဲမြန်မာဖောင့်သွင်း...
Flashlight + Clock_V1.3.5.APK
huawei lastest firmware အစုံ
Messenger ကနေစာပို့စာရေးတဲ့အခါ အသံ လေးတွေနဲ့ပို့နိ...
Play Storeထည့်လို့အဆင်မပြေသူများအတွက်Google Instal...
ဖောင့်စတိုင်ပါသော ဖုန်းများတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သောြ...
ဖုန်းမှာ You Tube uဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းယူနိုင်မည့်V...
Coolpad Firmware များ ... << Coolpad Firmware Coll...
HUAWEI EMMC လဲခြင်း eMMC လဲနည်း
ကွန်ပျူတာအတွက် မြန်မာ Font Style အခုပေါင်း 1000
computer service သမားများအတွက် Pc Mechanic
LG, Lenovo, Sony နှင့် HTC ဖုန်းတို့၏ Root လုပ်နည်...
Hwawei ဖုန်းတွေကို firmware ပြန်တင်နည်း (ကလောင်စုံ...
ကွန်ပျူတာအတွက် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိသော အသေးအမွှားပြသနာမ...
Laptop မှာ Wifi အလုပ်မလုပ်တဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်...
မဖြစ်မနေကြုံတွေ့နေကြ ကွန်ပျူတာမှ ပြသနာများဖြေရှင်း...
လေယာဉ်ပျံစစ်တိုက်ဂိမ်း [70.2 MB] [apk]
ထိုင်းမှာနေတဲ့မြန်မာတွေ မိမိဖုန်းကနေ ငွေလွှဲမယ်..Ph...
Huawei Offical Fireware များစုစည်းမှု
အလွန်တရာမှ အစွမ်းထက်လှတဲ့ android Binary တစ်ခု
♪ Facebook Account တွေအများကြီးကိုတစ်ပြိုင်နက်ထဲအသ...
ANDROID KITKAT 4.4.2 FIRMWARE FOR LENOVO K30W SMAR...
MTK သုံးဖုန်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့Firmware Back...
ဟတ်စကီး စစ်တိုက်ဂိမ်း [17.7 MB] [apk]
ကြက်ပစ် ဂိမ်း [24.2 MB] [apk]
မိမိ ဖုန်းထဲက Virus ပေါင်းများစွာကို နိုင်နိုင်နင်...
♪ Samsung Device တွေမှာကိုယ့်ဆီမှာ Myanmar Font ရှ...
ဖုန်းမှာ သဲရဲများကိုတိုက်ခိုက်ရသော Zombie Assault:...
Been Together apk 2016
မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကိုကြည့်ရှုနိုင်မဲ့I Map Myanmar...